Neoclassical Native- နှင့်အာဖရိက-အမေရိကန်အဆိုတော်
Edmonia Lewis ကတစ် neoclassical အာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့် Native အမေရိကန်ပန်းပုဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်ဒပန်းပုဆရာ, စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ပန်းပုမကြာခဏကျမ်းစာအပြင်အဆင်များသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ခွင့်သို့မဟုတ်အများအပြားစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးအပါအဝင်နာမည်ကျော်အမေရိကန် themes များနှင့်တကွ, နှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုပြန်လည်ခံစားခဲ့ရသညျ။ သူမသည်မကြာခဏသူမ၏အလုပ်အတွက်အာဖရိက, အာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့် Native အမေရိကန်လူမျိုးပုံဖော်။ သူမ၏အလုပ်အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
သူမသည်အထူးသဖြင့် neoclassical အမျိုးအစားအတွင်းသူမ၏သဘာဝအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူမ၏အကောင်းဆုံးလူသိများပန်းပု "လီယိုပတ်ထ၏မရဏ၏။ "
Lewis ကရှင်းလင်းခြင်းအတွက်အသေခံရ၏ သူမသေဆုံးသည့်ရက်စွဲနှင့်နေရာ 2011 ခုနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Edmonia Lewis က Native အမေရိကန်နှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်အမွေအနှစ်များနှင့်အတူမိခင်တစ်ဦးမှမွေးဖွားကလေးနှစ်ယောက်၏တစျခုဖွစျသညျ။ သူမ၏ဖခင်တစ်ဦးအာဖရိကအီ,a"ကိုလူကြီးလူကောင်းရဲ့ကျွန်။ " ခဲ့ သူမ၏မွေးနေ့နှင့်မွေးရပ်မြေ (နယူးယောက်? အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်?) သံသယ၌ရှိကြ၏။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူသူမ၏မွေးရပ်မြေနယူးယောက်အထက်ပိုင်းခဲ့အခိုင်အမာဖြစ်စေ 1843 သို့မဟုတ် 1845. Lewis ကအတွက်ဇူလိုင်လ 14 သို့မဟုတ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့ကြပေမည်။
Edmonia Lewis ကသူမ၏မိခင်ရဲ့လူမျိုး, Ojibway ၏ Mississauga တီးဝိုင်း (Chippewa အဘိဓါန်အင်ဒီးယန်း) နဲ့သူမရဲ့အစောပိုင်းကလေးဘဝနေခဲ့ရသည်။ သူမသည် Wildfire အဖြစ်လူသိများနှင့်နေထွက်အဖြစ်သူမ၏အစ်ကိုခဲ့သည်။ Lewis က 10 နှစ်ဦးအဒေါ်မှာသူတို့ကိုယူသောအခါသူတို့မိဘမဲ့ခဲ့ကြသည်အခါ။ သူတို့ကမြောက်ပိုင်းက New York ပြည်နယ်အတွက်နိုင်အာဂရာရေတံခွန်အနီးရှိနေထိုင်ခဲ့တယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားရွှေ Rush ကနေစည်းစိမ်နှင့်နေထွက်,, ပြီးတော့ Montana တစ်ဆံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်, သူ့အစ်မများအတွက် prep ကျောင်းကပညာရေး, ပြီးတော့မှာပညာရေးငွေကြေးထောက်ပံ့ Oberlin ကောလိပ် သူမက 1859 ခုနှစ်အတွက်အစ, အနုပညာကိုလေ့လာရှိရာ။
1862 ခုနှစ်တွင် Oberlin မှာနှစ်ခုအဖြူမိန်းကလေးများကသူတို့ကိုအဆိပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူကစွပ်စွဲထားသည်။ သူမသည်တရားသေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့် Anti-ကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေး vigilantes အားဖြင့်နှုတ်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်တစ်ဦးရိုက်နှက်မှုအကြောင်းမဲ့ခံခဲ့ရသည်။ Lewis ကအဖြစ်အပျက်အတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားမခံခဲ့ရသော်လည်း Oberlin ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုသူမ၏သူမ၏ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့နောက်နှစ်စာရင်းသွင်းခွင့်ပြုပါရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
New York မှာအစောပိုင်းအောင်မြင်
Edmonia Lewis ကကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးအားဖြင့်မိတ်ဆက်ပန်းပုဆရာအက်ဒဝပ် Brackett အတူလေ့လာဖို့ဘော်စတွန်နှင့် New York မြို့သို့သွားကြ၏ ဝီလျံလွိုက်တပ် ။ စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးသူမ၏အလုပ်ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာမှစတင်ခဲ့သည်။ သူမရဲ့ပထမဦးဆုံးတွေဆီကနေဗိုလ်မှူးကြီးရောဘတ်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် Shaw, ပြည်တွင်းစစ်ကြီးအတွက်အနက်ရောင်တပ်ဖွဲ့များကဦးဆောင်သူတစ်ဦးအဖြူ Bostonian ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်တွေဆီကနေ၏မိတ္တူကိုရောင်းခြင်း, ရောမမြို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရရှိသောနှင့်အတူနိုင်ခဲ့သည်။
ရောမမြို့စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းနှင့် Neoclassical စတိုင်တစ်ခုရွှေ့စိတ်အား
ရောမမြို့မှာတော့ Lewis ကထိုကဲ့သို့သော Harriet Hosmer, အန်း Whitney နှင့်မင်းသမီး Emma Stebbins အဖြစ်အခြားအမျိုးသမီးပန်းပုဆရာပါဝင်သည့်ကြီးမားသောအနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်စကျင်ကျောက်အတွင်းအလုပ်လုပ်ရန်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့် neoclassical စတိုင်ချမှတ်ခဲ့သေးသည်။ သူမကသူမ၏အလုပ်အတွက်အမှန်တကယ်တာဝန်မယူခဲ့ကြောင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားယူဆချက်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ, Lewis ကတစ်ဦးတည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ရောမမြို့မှဝယ်လက်ဆွဲငင်သောအနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာမပေးခဲ့ပါဘူး။ အမေရိကရှိသူမ၏နာယကများထဲတွင်ဖြစ်ခဲ့သည် လုဒိမာရီယာကလေး , အကုန်ကူးသည့်စနစ်ပပျောက်ရေးနဲ့အမျိုးသမီး။ အီတလီမှာနေထိုင်စဉ်သူမလည်းရိုမန်ကက်သလစ်ကူးပြောင်း။
Lewis ကအထူးသဖြင့်အာဖရိက, အာဖရိကန်အမေရိကန်, သို့မဟုတ်ဇာတိအမေရိကန်လူမျိုး၏သူမ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုအဘို့, အထူးသဖြင့်အမေရိကန်ခရီးသွားဧည့်အကြား, အခြို့အောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ အီဂျစ် themes များ, အချိန်, Black ကအာဖရိက၏ကိုယ်စားထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံပိုပြီးလူမျိုးစုတိကျစဉ်းစားသည်သော်လည်းသူမ၏အလုပ်, သူမ၏အမျိုးသမီးကိန်းဂဏန်းများများစွာ၏ကော့ကေးဆပ်ကြည့်ဘို့ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏အကောင်းဆုံးလူသိများပန်းပုများထဲတွင်:
(1867) ကိုအစဉ်အမြဲအခမဲ့: အကျင်းပနေအနက်ရောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အနက်ရောင်လူကို လွတ်မြောက်ခြင်းကြေညာထုတ်ပြန်ခြင်း , ကျွန်စနစ်ဖျက်သိမ်း 13 ပြင်ဆင်ရေး၏သဘောတူညီချက်ရေးထိုးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တစ် scuplture
တော (1868) တွင်ဟာဂရ: စာရာများနှင့်အာဗွဟံ၏အီဂျစ်ကြှနျမ၏, ဣရှမေလ၏မိခင်
အဆိုပါဟောငျး Arrow သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားနှင့်သူ၏သမီး (1872): ဇာတိအမေရိကန်တွေသရုပ်ဖော်ထားတဲ့
လီယိုပတ်ထ၏မရဏ (1875): အီဂျစ်မိဖုရားသရုပ်ဖော်ထားတဲ့
Edmonia Lewis ကအဆိုပါ 1876 Philadelphia တွင် Centenniel များအတွက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျ "လီယိုပတ်ထ၏မရဏ" ကိုဖန်တီး, ထိုသို့ကိုလည်း 1878 ချီကာဂို Exposition မှာပြသခဲ့သည်။ ထိုအခါကရာစုနှစ်တစ်ခုအဘို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းကပထမဦးစွာဂေါက်ကွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်နေချိန်မှာဒါဟာခဲယမ်းစက်ရုံထို့နောက်တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းပိုင်ရှင်၏အနှစ်သက်ဆုံးမြင်း, လီယိုပတ်ထ၏သင်္ချိုင်းပေါ်မှာပြသပြီထွက်ခဲ့သည်။
အခြားအဆောက်အဦစီမံကိန်းကိုနှင့်တကွ, ရုပ်တုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ပွနျလညျရှာဖှတှေ့နှင့်ဒါဟာယခု Smithsonian အမေရိကန်အနုပညာပြတိုက်၏စုဆောင်းခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် 1987 ခုနှစ်ကဲ့သို့ပကတိဖြစ်လေ၏ခဲ့သည်။
Edmonia Lewis ကကွယ်လွန်သူ 1880 ခုနှစ်တွင်အများပြည်သူမြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားသည်။ သူမ၏နောက်ဆုံးလူသိများပန်းပု 1883 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဖရက်ဒရစ် Douglass ရောမမွို့ရှိသူမ၏နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်အတွက် 1887. တစ်ဦးကကက်သလစ်မဂ္ဂဇင်း 1909 ခုနှစ်မှာသူမရဲ့အဖြစ်အသကျရှငျကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ရောမမွို့ရှိသူမ၏တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ 1911 ၌ရှိ၏။
အချိန်ကြာမြင့်စွာမရှိပြတ်သားသေခြင်းတရားနေ့စွဲ Edmonia Lewis ကလူသိများခဲ့သည်။ 1909 နှင့် 1911 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ထိုအစီရင်ခံစာများရှိနေသော်လည်းစက်တင်ဘာလ 17, 1907 ရက်တွင် 2011 ခုနှစ်, ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းပညာရှင်အဆိုတော် Marilyn ရစ်ချတ်ဆန်သူမကလန်ဒန်၏ Hammersmith ဧရိယာတှငျနထေိုငျခဲ့ကွောငျးကိုဗြိတိသျှမှတ်တမ်းများကနေသက်သေအထောက်အထားအဝတ်မခြုံဘဲနှင့် Hammersmith Borough Infirmary ၌သေကြ၏။
"ငါသည်လက်တွေ့ကျကျအနုပညာယဉ်ကျေးမှုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများရရှိရန်, ငါအဆက်မပြတ်ငါ့အအရောင်၏သတိပေးမခံခဲ့ရတဲ့လူမှုရေးလေထုကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်ရောမမြို့မှမောင်းနှင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်မှု၏ပြည်အရောင်ပန်းပုဆရာများအတွက်အခန်းကိုမပေးခဲ့ရသည်။ "
"ငါနေတဲ့အရောင်မိန်းကလေးဖြစ်၏, ငါချီးမွမ်းကြောင်းကြင်နာချင်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကငါ့ကိုချီးမွမ်း၏။ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအကြှနျုပျအဘို့ကောငျးမှမဟုတ်ပါဘူးငါသိ၏။ ငါ့ကိုတစ်ခုခုသင်ပေးပါလိမ့်မယ်ငါမဟုတ်ဘဲ, သင်သည်ငါ၏အချို့ယွင်းချက်ထောက်ပြမယ်လို့ခဲ့သည်။ "
"အခမဲ့သစ်တောကဲ့သို့လှသောဘာမျှမရှိပါ။ သင်သည်မွတ်သိပ်သောအခါ, ငါးဖမ်းတဲ့အပင်၏အကိုင်းအခက်ကိုခုတ်ပါကကင်မှမီးကိုလုပ်ပြီးလျှင်, ပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်စားစေရန်, အားလုံးဇိမ်ခံပစ္စည်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ။ ကျနော် ဒါကြောင့်အနုပညာအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတ်အားထက်သန်မှုအဘို့မဟုတ်ကြလျှင်, မြို့ကြီးများရှိတက် pent တစ်ပါတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ " (ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 1864. , အမျိုးသား Anti-ကျွန် Standard တှငျစာတစ်စောင်ထဲမှာလုဒိမာရီယာကလေးသူငယ်များကကိုးကား)
"ကျနော့်ရဲ့မိခင်တစ်ဦးရိုင်းအိန္ဒိယဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်ကြေးနီအရောင်နှင့်ဖြောင့်, အနက်ရောင်ဆံပင်နဲ့အတူအယ်လ်ဘာနီတှငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ အဲဒီမှာသူမ လုပ်. moccasins ရောင်းချခဲ့သည်။ တစ်ဦး negro သူငါ့အဘ, နှင့်လူကြီးလူကောင်းရဲ့ကျွန်, သူမ၏မြင်သူမ၏လက်ထပ် ။ "
Edmonia Lewis ကမြန်အချက်အလက်
အမည်: မာရိသညျ Edmonia Lewis က
မွေးဖွားခြင်း: ဇူလိုင်လ 14 သို့မဟုတ်ဇူလိုင်လ 4, 1843 သို့မဟုတ် 1845 တစ်ခုခုအတွက်
အသေသတ်ခြင်းကို: လန်ဒန်, စက်တင်ဘာလ 17, 1907
Edmonia, Wildfire: အဖြစ်လူသိများ
ပညာရေး: Oberlin ကောလိပ်
New York အပေါ်ဘက်ကနယူးယောက်စီးတီး, ရောမမြို့, လန်ဒန် in: နေထိုင်ခဲ့
Neoclassical အာဖရိကန်အမေရိကန်နှင့် Native အမေရိကန်ပန်းပုဆရာ for: လူသိများ
နာမည်ကြီးအကျင့်ကိုကျင့်: ထာဝစဉ်အခမဲ့ (1867), တော၌ဟာဂရ (1868); အဆိုပါဟောငျး Arrow သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားနှင့်သူ၏သမီး (1872); လီယိုပတ်ထ၏မရဏ (1875) ။
> Jeannine Atkins ။ ကျောက်ခေတ်: Mirrors Edmonia Lewis က၏ပန်းပုရုပ်များနှင့်တိတ်ဆိတ်။ 2017 Fiction အတ္ထုပ္ပတ္တိ။
> Kirsten Pai Buick ကား။ မာရိသညျ Edmonia Lewis ကနှင့်အနုပညာသမိုင်းရဲ့ Black နဲ့အိန္ဒိယအကြောင်းအရာများ၏ပြဿနာ: အမီးသတ်၏ကလေးသူငယ်။ 2009 ။
> ဟယ်ရီ Henderson, အဲလ်ဘတ် Henderson ။ Edmonia Lewis က၏ Indomitable ဝိညာဉ်တော်သည်။ တစ်ဦးက Narrative အတ္ထုပ္ပတ္တိ။ 2013 ခုနှစ်။
အမ်း Richards Quotes
Lesbos ရုပ်ပုံပြခန်း၏ Sappho
Tuscany ၏ Matilda
Sean Connery အတူ7ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
ဤတွင်ကိုလိုက်နာပါရန်အဆိုပါ 20 အကောင်းဆုံးပျင်းတာဟာ-Busting Subreddits Are
တောင်အာဖရိကဧဝံဂေလိတရားကိုစတင် CD များ
တစ်ဦး Poker ပြိုင်ပွဲအတွက် Add-ons
ယေရှဲ Owen: လေးအချိန်အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ် Medalist
အဘယ်ကြောင့်သင်ကဘိုးလင်းဖိနပ် Wear မှဖူးသလား?
သင်ကချဲ့ Buy ခင်မှာ
ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်: ကိုယ်ဝန်ဖျက်၏ငျြ့တရားအပေါ်အဓမ္မ Views စာ
အဆိုပါ Bugle ခေါ်ရန်ဘုံဘိုင်၏ပုံပြင်
ဟောငျးအလုပ်အကိုင်၏အဘိဓါန် - S နဲ့စတင်ဒါကအလုပ်အကိုင်
နိုင်ငံရေးထဲသို့ Get လုပ်နည်း
သင်ကအဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းအကြောင်းကိုသိမနေပါနဲ့ 10 အရာ
အသွေးအရောင်စုံမီးတစ်ဦးသက်တံ့ရောင် Make လုပ်နည်း
PSI ဆိုတာဘာလဲ - ယူနစ်၏အဓိပ္ပာယ်
Evaporite တွင်းထွက်ပစ္စည်းများနှင့် Halides
အဆိုပါငါး Element ကိုသင်္ကေတ: မီးဘေး, ရေ, လေတပ်, ကမ္ဘာမြေသောဝိညာဉ်တော်